Ururka gaadiidka Yurub wuxuu dalbanayaa heerarka shaqada ee ugu yar gudaha Lufthansa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ururka gaadiidka Yurub wuxuu dalbanayaa heerarka shaqada ee ugu yar gudaha Lufthansa
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Ururka gaadiidka Yurub wuxuu dalbanayaa heerarka shaqada ee ugu yar gudaha Kooxda Lufthansa
Muhiimad ahaan, shaqaalaha iyo loo -shaqeeyayaashuba waxay u baahan yihiin inay si wada jir ah uga soo baxaan dhibaatadan, sidaa darteedna waa inaan hore u galnaa wada -hadal bulsheed si aan u hubinno in si habsami leh loo abuuro hay'ado cusub iyo kala -guurka iyada oo loo marayo geeddi -socod kasta oo isbeddel lagama maarmaan ah oo leh caddaalad iyo furfurnaan doodaha.
Ururada shaqaaluhu waxay rabaan heerar shaqo oo hufan gudaha Kooxda Lufthansa.
Heerarka hoose ee xaaladaha shaqada waxay ku xad gudbaan xuquuqda shaqaalaha.
Tartanka gudaha ee Lufthansa waxaa lagu xalin karaa fulinta heshiisyada wadajirka ah.
Qeexidda heerarka ugu hooseeya ee xaaladaha shaqada ee dadka ka shaqeeya dhammaan Kooxda Lufthansa waa tallaabada ugu horreysa ee lagu joojinayo falalka daadinta bulshada ee socda shirkadda hawada Jarmalka waa wax laga xishoodo, laakiin miyir qabta, u dulqaadashada meel ka baxsan maraakiibta waaweyn.
Warqad dhowaan loo diray Guddoomiyaha Deutsche Lufthansa, Mr. Carsten SPOHR, the Xiriirka Shaqaalaha Yurub ee Gaadiidka (ETF) waxay cambaareyneysaa '' heerarka bulshada iyo shaqada ee hoose ee shaqaalaha '', kaas oo Kooxda Lufthansa maamulku wuxuu sii wadaa inuu si xeeladaysan u hirgeliyo hawlgalkiisa Eurowings Discover. Kooxdu waxay rumaysan tahay in falalka noocan ahi ay yihiin xalka kaliya ee degdegga ah ee suurtagalka ah ee lagu wajihi karo cadaadiska dhaqaale ee hadda ka jira suuqa, oo ETF -ku diido.
Marka loo eego kuwa ku xiran ETF-Kapers (Switzerland), Vida (Awstaria), Aircrew Alliance iyo ver.di (Jarmalka) iyo B.United (Czech Republic)-xalkani wuxuu abuurayaa waxa loogu yeero “koox-cunis kooxeed gudaha ah”, waxayna taageertaa orodka ilaa meesha ugu hooseysa. Dhanka kale heerarka hoose ee xaaladaha shaqada ee ay soo rogeen inta badan shirkadaha diyaaradaha ee jaban ee Yurub ayaa si weyn ugu xadgudba xuquuqda aasaasiga ah ee shaqada, kooxduna waxay u tartamaysaa caqiido la mid ah. Tani waa sababta Xiriirka Shaqaalaha Gaadiidka ee Yurub iyo la -hawlgalayaasheeda ay si aad ah u weydiisanayaan in moodelkan aan loo tixgelin inuu yahay qorshe loogu talagalay hay'adaha cusub, sida kiiska Eurowings Discover, oo ah shirkadda diyaaradaha ee ugu cusub oo bilaabay inay ka dhex shaqeyso Kooxda Lufthansa bil.
Taa bedelkeeda, waxaan u aragnaa in tartanka gudaha ee Kooxda Lutfhansa lagu xallin karo iyadoo la fulinayo heshiisyada wadajirka ah oo ay ku jiraan Eurowings Discover, iyo qaabkan fulinta waa in markaa laga sii fuliyo dhammaan hawlgalladeeda Yurub. Ururrada matalaya shaqaalaha Kooxda Lufthansa iyo ETF - oo matalaya 5 milyan oo shaqaale gaadiid ah oo ku nool Yurub iyo meelo ka baxsan - waxay qabaan fikirka ah in tallaabada ugu horreysa ee jihadaani ay noqon doonto:
dib -u -bilaabista wada -hadalka bulsheed ee dhammaan wadayaasha halkaan oo aan firfircoonayn, oo ay ku jiraan Eurowings Discover iyo
raadinta dhulka guud ee dejinta jaangooyooyinka ugu yar ee ku saabsan xaaladaha shaqada ee kumanaanka shaqaalaha ee Lufthansa Group oo aan hadda haysan heshiis wadareed.
Eoin Coates, Madaxa Duulista ee ETF wuxuu ku dhawaaqay:
'' Muhiimad ahaan, shaqaalaha iyo loo -shaqeeyayaashuba waxay u baahan yihiin inay si wada jir ah uga soo baxaan dhibaatadan, sidaa darteedna waa inaan hore u galnaa wada -xaajood bulsheed si aan u hubinno in si habsami leh loo abuuro hay'ado cusub iyo kala -guurka iyada oo loo marayo geeddi -socod kasta oo isbeddel loo baahan yahay oo leh caddaalad iyo furfurnaan doodaha noocaas ah. ''
ETF iyo la -hawlgalayaasheeda ku jira Kooxda Lufthansa waxay si aad ah u weydiinayaan kooxaha maareynta dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee ka dhex shaqeeya Kooxda Lufthansa inay dib u bilaabaan wada -xaajoodka bulsheed ee ururada wakiillada si isku -dhafan, hufan oo joogto ah. Tani waxay calaamad cad u tahay in Lufthansa Group ay dhab ahaantii qaadayso tillaabooyin la taaban karo oo ku aaddan beddelidda jihada khaldan ee kooxdu qaadayso iyadoo go'aansanaysa inay hoos u dhigto heerarka bulshada iyo shaqada ee shaqaalaheeda ku jira shirkado cusub.